Running lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Eto dia afaka mahita maimaim-poana amin'ny aterineto lalao video rehetra izay tsy maintsy mihazakazaka. Izay mety ho fahafahana haneho asa sy mampiseho ny hafainganam-pandeha an-tongotra dia raisina ho toy ny zava-tsarotra amin'ny faharetana sy haingana. Ny ankizy aza tsy tonga saina hoe nahoana ary aiza ny mihazakazaka, ihany mba ho haingana kokoa ny hafa. Ka izany no lalao dia aseho miaraka amin'ny fahafahana hifaninana hanohitra ny virtoaly na tena. Afaka milalao amin'ny namany, miezaka ny hahazo kokoa ny hevitra sy avy aloha ka hatramin'ny farany. Dia hihaona mahery fo ny tantara an-tsary maro izay nahatratra, nandositra, mifaninana amin'ny Lalao Olaimpika.
Hop Aza Ajanony
Ireo mpihaza mahafaty
Mitsambikina Jelly Jump
Harena any anaty ala
Lalao Games izay tsy maintsy mihazakazaka tamin'ny Category:
Farany Running lalao
Subway Surfers Runner ora
Andriamatoa Lupato 2 Harena Piramida egyptiana
Lalao squid Space Squid Challenge
Lalao subway squid
Lalao squid: Jiro maintso, jiro mena
Fitsangatsanganana an-tany ambanin'ny tany Surfers Hong Kong
Surfers Surfers Edinburgh
Squid Lalao 3D Online
Lalao Online Rehetra Running lalao
Hetsika – ny fiainana!
ny fotoana rehetra isika ao mihetsika, fa raha olon-dehibe loatra ny hafainganam-pandeha mihoatra ny ara-dalàna mandeha, ny ankizy tsy Mipetraha eo amin'ny tany sy ny jumps amin'ny fotoana rehetra, any ho any mba mihazakazaka. Dia milalao an-:
niara-nihazakazaka tamin'ny baolina,
mbetika amin'ny malalany alika teo amin'ny bozaka,
hitsambikina tady sy fingotra fatorana. &Nbsp;
Fa ny fiainana mipetrapetraka maro ho lasa fanekem-pinoana, ary izy ireo hanokana ny fanatanjahan-tena. Voalohany, dia ny fizarana ny ankizy, fa raha manana ny talenta, ny mpanazatra ho avy mialoha lehibe, ary ny zaza te-ho atleta matihanina, dia mampitombo ny enta-mavesatra, ary mikendry ny rakitsoratra vaovao. Games izay tsy maintsy mihazakazaka sy mitsambikina, nahasarika ny sain'ny mitovy fihetsehana, ka hilazana azy, na dia ireo izay noho ny antony tsy hitaingin afaka eo amin'ny fiainana tahaka ny briskly. Ireo lalao vokatra nokapohiny toe-javatra maro izay mazoto ny endri-tsoratra. Ao amin'ny sokajy fanatanjahan-tena, dia afaka manondro azy ireo matoanteny, baolina kitra, baskety, volley, mihazakazaka eo amin'ny fanatanjahan-tena lalana, nitsambikina avo sy ny lavitra. Mandritra izany fotoana izany ny endri-tsoratra tonga eto mba hampifalifaly anao, izay mitondra miaraka aminy manokana loko sy ny tsirony. Ohatra, ny osa alika Scooby Doo mampino matahotra matoatoa, izay matetika no mitranga miaraka amin'izay koa. Na dia tao amin'ny kianja izay mihazakazaka ny hazakazaka lavitra ezaka amin'ny fandresena sakana mifatotra aminy disembodied fanahy. Fa izany ihany no manampy mba hanafainganana ny alika ary manokatra miafina vaovao tahiry avo roa heny ny hafainganam-pandeha mba handrakotra ny lavitra.
mba milalao izay tsy maintsy mihazakazaka manodidina ny toerana tena endri-tsoratra
Play lalao izay tsy maintsy mihazakazaka manodidina sy nanontany tena rehefa manaraka Tom sy Jerry. Amin'ny roa ireo dia tsy leo, indrindra fa rehefa avy ny amin'ny tetika vaovao amin'izy samy izy. Mihazakazaka amin'izao fotoana izao izy ireo ary matetika indrindra totozy Jerry mandositra avy amin'ny saka tezitra Tom. Mihazakazaka manodidina rehetra sy noho ny antony. Mitsambikina eo amin'ny racetrack hifaninana amin'ny hafainganam-pandeha, ka ho tonga any amin'ny tsipika fahatongavana ihany no tsara indrindra. Ary izany fifaninanana tsy toa mora, ny lalana manasarotra ny mahazatra toy izany sakana ho an'ny foko sy ny vaovao. Rehetra ny lalao izay tsy maintsy mihazakazaka izany mitaky ny mpilalao mba hifantoka ary vita soa aman-tsara asa fotsiny dia hamita ny sehatra nanomboka hanenjika fitsarana vaovao. Zareo ka tsy mihazakazaka manontany tena ny antony aimlessly ny ankizilahy dia ho afaka ny hitifitra eo amin'ny fahavalo na mba hahatratra azy ireo hiatrika ny fahavalo. Fanangonana ny asa tanana ihany koa tafiditra ao ny asa Ny sasany tena mahaliana kilalao sy manangona vola madinika, kristaly, fahiny rakitry ny ela. Indraindray ny mihetsika dia tsy eny amin'ny habakabaka, ary tsy misy ao amin'ny Misafotofoto sy tendrombohitra, na ambanin'ny tany.
Indro ny mpilalao miandry loza samy hafa, fa mba hanakana kosa tsy mba soso-kevitra, satria amin'ny fotoana rehetra dia afaka hanafika mampatahotra biby goavam-be na ny firodanan'ny hitranga. Haingana, dia tsy maintsy manaraka tsara izay ao am-paladianareo, raha tsy izany dia afaka latsaka any an-davaka, na misokatra, latsaka any an-puddle ny poizina na hanitsaka ny poizina zavamaniry. Ankoatra izany, any ambanin'ny tany afaka manafina biby mampidi-doza, ary afa-tsy eny ambonin'ny tany nametraka fandrika mahafaty. Super Mario miseho matetika indrindra ao ireo lalao, ka mandrakariva maika hamonjy, handrava, hanangona sy hanorina. Ary nandritra ny lalao ho an'ny ankizivavy izay tsy maintsy mihazakazaka, dia afaka mifehy ny mampihomehy kely bibikely, manampy azy ireo handresy ny fifaninanana amin'ny hafainganam-pandeha. Little kittens, dinôzôro, alika kely sy bitro koa ny mitsambikina, misambotra ny baolina, nanangona taolana sy ny karaoty. Nihaona tena am-pilaminana ihany koa vahiny, SpongeBob, Madagascar Penguins, matoatoa, Bart Simpson. Noho ny baolina mena handeha be dia be ny lalana ary mitsambikina ny sakana maro mba hanatanterahana ny iraka sy ny hamonjy ny malalany. Fa izay avy amin'ny zazavavy tsy mba hitsambikina eo amin'ny kely na Fairy mitaingina pony ombimanga?